လင်းသန့်| June 11, 2012 | Hits:10,267
20 | | ယမန်နေ့ ညပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောနေသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်(ဓာတ်ပုံ - သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်)
16 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Thaw Zin Aye June 11, 2012 - 7:14 pm	I like n read the irrawaddy regularly.
Reply	U.G June 11, 2012 - 8:24 pm	အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ခေါင်းဆောင်ဦးတင်ဦးပြောတာကို ..ကန့်ကွက်ပါတယ်… (အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာရတဲ့အထိဆိုတာကတော့ မလိုလားအပ်ဖူးပေါ့)နှင့်(မြန်မြန်အေးချမ်းမှုရအောင် အတွက် ဒီလိုပဲ နောက်ဆုံးသုံးလိုက်ရတာပေါ့)ဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်တွေက ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စတွေမှာ အန်အယ်လ်ဒီ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလူတွေ ပြည်ပ ရိုဟင်၈ျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ပါဝင်ပါတ်သက်မှုရှိနေသလဲဆိုတဲ့ သံသယအတွေးတခု ကို ဖြစ်ပေါ်နေစေပါတယ်….တကယ်လို့ များ ဒေါ်စုရဲ့ ဥရောပတခွင် လှည့် လည်တဲ့ အပျော်တမ်း ခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံတကာ ၀ါရင့် မီဒီယာသမားတွေက ဒီ ရခိုင်နဲ့ ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)အကြမ်းဖက် လူသတ်ပွဲအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်လာရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတာ ကို ပြည်တွင်းက ပြည်သူလူထုကို ကြိုတင်ပြောပြလို့ ရနိုင်မလား….
Reply	ARMY OFFICER June 11, 2012 - 10:51 pm	WE WANT MILITARY GOVERNMENT.
Reply	ARMY OFFICER June 11, 2012 - 10:52 pm	PLEASE ISSUE ANOTHER ORDER CONSTITUTION POAT MA 413(B).
Reply	ko chit June 11, 2012 - 11:52 pm	ကနေ့နိုင်ငံရေးသမားအများစုမှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် တာဝန်ယူဘူးတဲ့သူ အရမ်းနည်းပါတယ်။
Reply	Pyi Hein June 12, 2012 - 1:00 am	We are so disappointed Daw Aung San Su Kyi and NLDs because of their silence about Rohingya!Are they afraid of Western?They haven’t do anything!We will never forgive for this event for our blood! From now on, Sorry, NLD !
Reply	မောင်မောင် June 12, 2012 - 1:04 am	Dedicated to U.G…
Reply	ကိုအောင် June 12, 2012 - 4:06 am	ဒေါ်စု ကို လေးစားပါတယ်။ခု အခြေအနေက တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ. အချိန်လို.မြင်ပါတယ်။ NLD ပါတီ ကြီးကတော. မေးခွန်းထုတ် စရာတွေ များနေပါပီ။ တချိန်မှာ အစိုးရဖွဲ.မယ်လို. ရည်မှန်းထား တာပဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ထား လဲ?? ဒီလို ကြုံလာရရင် ဘာလုပ်မယ်လို. စဉ်းစားထားလဲ??? အရာရာ ဒေါ်စု အားကိုးနေတာလား???? လောလောဆယ် ရခိုင်အရေး ကို ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ပေးမယ် စဉ်းစားထားလဲ???? ရိုဟင်ဂျာတွေ ရဲ. လုပ်ရပ်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲလို.မေးလာရင် ဘယ်လို အဖြေပေးမလဲ???ခုလဲဖြေရမယ် နောင်လဲဖြေရမယ် ဘာလို. အဖြေမပေး တာလဲ?????
Reply	khai June 12, 2012 - 9:58 am	မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြေငြာချက်အရ ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်
Reply	လေပြေ June 12, 2012 - 11:32 am	ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥရောပခရီးစဉ်မှာ အမေစုဘယ်လိုဖြေမလဲ သားတို့အရမ်းသိချင်ပါတယ် ဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ် အမေ့ပါးစပ်ကပြောတာ(ဖြစ်နိုင်ရင်ဥရောပမသွားခင်)သားတို့အရမ်းသိချင်ပါတယ် ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရပ်တည်ချက် အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
Reply	ရာဇာ June 12, 2012 - 12:04 pm	နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြောလို့မရပါဘူး…ဒေါ်စု နေနဲ့လဲ အခုနေမှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသေးပါဘူး..အကယ်၍ ဒေါ်စု အနေဖြင့် ဤကိစ္စမျိုး ကိုမည်သို့ ကိုင်တွယ် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုသူ များရှိခဲ့သော် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး မှ ဒေါ်စု အား တရားဝင် တာဝန် ပေးခိုင်းကြည့်လိုက်ပါ…ဒါဆိုရင် ဒေါ်စု ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြရမှာပေါ့…တာဝန်ပေး တဲ့နေရာမှာ လဲ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးက ဒေါ်စု ရဲ့ အစီအမံ အတိုင်းလုပ်ကြရမယ် ဆိုတာကိုတော့ ထဲ့သွင်းပေးရမယ်….အခုချိန်မှာ နိူင်ငံရေး ပါတီတွေက လူမှုရေး အရလောက်ဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့…
Reply	Lay hone June 12, 2012 - 12:16 pm	‘ Get up N L D’; what are you doing?
Reply	mg mg June 12, 2012 - 2:23 pm	ဒါပေမယ့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး၊ ဒါကိုလည်း ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်စေချင်တယ်”ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့မှ ကိုကိုကြီး က ဧရာဝတီကို ပြောသည် ……..ဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့အဖွဲ့သွားပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းထိန်းသိမ်း
Reply	ကချင်လေး June 12, 2012 - 7:47 pm	ကိုကိုကြီးရဲ့ ပြတ်သားမှုအတွက် လုံဝထောက်ခံပါတယ်။အရှိကို အရှိအတိုင်းမြင်နိုင်ပါစေ။
Reply	ချယ်ရီ June 12, 2012 - 8:09 pm	ဒေါ်စုကဘာတွေလုပ်ပေးရဦးမှာလဲ။ဒီလိုဒီမိုကရေစီရလာတာအမေစုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုတာမေ့သွားပြီလား။ငါ့လှေငါထိုးပဲခူးရောက်ရောက်ဆိုပြီးတဖက်သတ်မပြောပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကကောနိင်ငံရေးဘာနားလည်လို့လဲ။ဒေါ်စုကရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ရပ်ကိုအားပေးစကားပြောတာကလွဲလို့ဘာမှလုပ်ပေးနိင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေစုမှာချမ်းသာတာဆိုလို့မေတ္တာတရားပဲရှိလို့ပဲ။အဲဒီလောက်တောင်မကျေနပ်ဖြစ်နေရင်ကိုယ်တိုင်သေနတ်ကိုင်ပြီးလုံထိန်းအဖွဲထဲသွားအောင်းနေလိုက်။
Reply	keyword June 17, 2012 - 7:01 pm	U.G,ko chit,ကိုအောင်,လေပြေ နဲ့ mg mg တို့ ကိုရှင်းပြမယ်၊